လူတွေက Cyberporn ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရင်သူတို့ Mojo ကိုပြန်ရကြမလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Wiederhold Brenda K သည် .. Editor ကို-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2017, 20 (2): 71-71 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2017.29062.bkw ။ Published in ပြည်တွင်းသတင်း Volume ကို: 20 Issue 2: ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2017 (ဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန်)
ဒီဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသုတေသန 10 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကသုံးသပ်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဓိကအားကြောင့်လည်းအမည်မဖော်ထောက်ပံ့ပေးသောအင်တာနက်တွင်ကျယ်စွာသဘောသဘာဝ, ရန်, တိုးတကျခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။1 ပိုများသောမကြာသေးမီက, ဒီဂျာနယ် 832 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 90% ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေအစီရင်ခံသော။ ကိုတွေ့ရာ 51 အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးနမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးသစ်ကိုသုတေသန, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဤရွေ့ကားသုတေသီများ cyberpornography အချိန်အသုံးပြုမှုကိုရိပ်မိစွဲလမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် "ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကျင်းပအသင်းအဖွဲ့များဤပုံစံများ။ "2
"1 ။ အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲတိုးလာနှင့်ခွဲခြာနှင့်ကွာရှင်း၏အန္တရာယ်
2 ။ အိမ်ထောင်ရေးရငျးနှီးမှုနှငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျ
3 ။ မယုံကြည်ခြင်း
4 ။ , ကြမ်းတမ်းတရားမဝင်, ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်မကင်းအလေ့အထများနှင့်ဆက်စပ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပိုမိုဂရပ်ဖစ်အမျိုးအစားများများအတွက်တိုးမြှင့်စာစားချင်စိတ်ကို
5 ။ မယား, အိမ်ထောင်ရေး, နှင့်ကလေးမွေးမြူ၏တန်ဖိုး
6 ။ compulsive နှင့်စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူရုန်းကန်နေကလူတစ်ဦးတိုးပွားလာ။ "3
အဘယ်အရာကို cyberporn မှစွဲလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်? အီတလီမှာတစ်ဦးကသုတေသီတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးသည်: "။ စွဲလူများ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ကိုသုံးပါနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ, သူတို့သည်လည်းအလွန်မကြာခဏကျဘာနှင့်ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းပစ္စည်းများအားဖြင့်စွဲလမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူချက်တင်ခန်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်"4
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကော်မတီ, မာရိသညျအန်း Layden, Ph.D, ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ပူးတွဲဒါရိုက်တာနှင့် Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Psychopathology အစီအစဉ်မတိုင်မီသက်သေခံချက်မှာကြည့်ရှု၏ညစ်ညမ်းပျက်စီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ငါသည်လည်းငါ၏အလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုအတွက်မြင်ကြပြီ "ဟုပြောသည် ။ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ စက္ကူ, celluloid နှင့်ဆိုက်ဘာစပေ့နှင့်အတူသဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုအတွက်ဤမျှလောက်အချိန်ကြာအောင်တော်မူပြီးမှ, သူတို့ကခဲယဉ်းတဲ့စစ်မှန်သောလူ့ဖြစ်လျက်ရှိနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ရှာတွေ့ပုံရသည်။ ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပမာဏအဘို့မိမိတို့မျှော်လင့်ထားနှင့်ဝယ်လိုအားပြုစုပျိုးထောင်လျက်ရှိ၏ တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကလိင်တွေ့ကြုံခံစားဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချနေပါတယ်။ "5
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောသူများသည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြန်လည်အားဖြည့်ရန်နှင့်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူဆိုတာမလုံလောက်ဘူး။ ဘွဲ့ကြိုအမျိုးသား ၁၂၅ ယောက်ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအရမင်းဟာ cyberporn နဲ့ဝေးဝေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။6
သို့သော်လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆိုက်ဘာဝက်ဆိုက်မှတားမြစ်ခြင်းကိုပထမအဆင့်အဖြစ်အကြံပြုသည် -“ တစ်ချိန်ကအမျိုးသားများတွင်လိင်မှုကိစ္စပြexplainedနာများကိုရှင်းပြခဲ့သည့်ရိုးရာအချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာပေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများကိုသရုပ်ပြရန်ဘာသာရပ်များသည်အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏အသုံးပြုသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းအစီရင်ခံစာများကဖော်ပြသည်။ ”7
1. MB Short, L Black, AH Smith ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကနည်းစနစ်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုသုတေသနပြုသည်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ၊ အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက် ၂၀၁၂; ၁၅: ၁၃-၂၃ ။
၂။ S Blais-Lecours၊ အမတ် Vaillancourt-Morel၊ S Sabourin စသည်။ Cyberpornography - အချိန်အသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှု၊ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာ၊ အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက် ၂၀၁၆; 2: 2016-19 ။
3. J ကို Manning ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏လက်ထပ်ခြင်းနှင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုကြားနာခြင်း။ ယူအက်စ်အထက်လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၅ www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/manning_testimony_11_10_05.pdf (ဒီဇင်ဘာလ 5, 2016 ဝင်ရောက်) ။
4 ။ F ကို Saliceti ။ အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ (IAD) ။ Procedia-လူမှုရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ 2015; 191: 1372-1376 ။
5. J ကို Reisman, J ကို Sanitover, MA Layden, et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်စွဲလမ်းမှု၏နောက်ကွယ်နောက်ကွယ်ရှိ ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာကိုကြားနာခြင်း။ အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေး၊ သိပ္ပံနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၄ ။ www.ccv.org/wp-content/uploads/2010/04/Judith_Reisman_Senate_Testimony-2004.11.18.pdf (ဒီဇင်ဘာလ 5, 2016 ဝင်ရောက်) ။
၆။ JW Abell, TA Steenbergh, MJ Boivin ။ ဘာသာတရား၏ဆက်စပ်မှုတွင်ဆိုက်ဘာဖုန်ကိုအသုံးပြုသည်။ စိတ်ပညာ & ဓမ္မ6၏ဂျာနယ်; 2006: 34-165 ။
7 ။ et al ပန်းခြံ, G Wilson က, ဂျေ Berger, BY ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖြစ်စေတဲ့သလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 2016; 6: 17 ။